Beauty Screensaver & Animated Wallpaper ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Screensaver နှင့် Animated Wallpaper... လေးတွေ လိုချင်တဲ့သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...! ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာလေးကို သူများနှင့်မတူပဲ ဖလန်းဖလန်း ထစေချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ...! ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကလည်း 33 MB ပဲရှိပါတယ်...! ဖလန်းဖလန်း ထချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
No Response to "Beauty Screensaver & Animated Wallpaper ...!"